कसरि बनाउने तिलको लड्डु ? यस्ता छन् खानुका फाइदा
माघ संक्रान्ति नेपालको एक प्रमुख चाड हो । विभिन्न समुदायले यो चाडलाई बेग्लाबेग्लै हिसाबले मनाउने गर्दछन् । थारु समुदायमा माघी र अन्यले माघे संक्रान्तिको नाउँमा चाड मनाउने प्रचलन छ ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यो दिनदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई 'मकर संक्रान्ति'भनिन्छ । यो दिनदेखि सूर्य दक्षिणी गोलार्द्धबाट उत्तरी गोलार्द्धतर्फ सर्दै जाने भएकाले दिन लामो र रात छोटो हुँदै जाने जनविश्वास रही आएको छ ।
माघ संक्रान्ति पर्वमा विभिन्न परिकार खाने र नदी तथा जलाशयहरुमा स्नान गर्ने गरिन्छ ।यो दिन खिचडी, तरुल, चाकु, तिलको लडड् आदि खाने चलन छ । तिलको लड्डु स्वादिलो त हुन्छ नै यसका फाइदा पनि अनेक रहेका छन् ।
रुघा खोकीबाट बचाउँछ : यो खाँदा शरिरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ र रुघाखोकीबाट राहत प्रदान गर्दछ ।
क्यान्सरको जोखिम कम : तिलमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सरको सेल्सको गठन हुन रोकिदिन्छ ।
जोर्नी दुखाईमा राहत : यसमा क्याल्सियम हुन्छ जसले हड्डी बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ र जोर्नी दुखाईबाट राहत प्रदान गर्दछ ।
पाचनमा सहयोग : सख्खरमा र तिलमा फाइबर हुन्छ जसले पाचन शक्तिलाई बलियो बनाउँछ र कब्जियतको समस्याबाट बचाउँछ ।
चोटपटकमा राहत : यसमा जिंक हुन्छ जसले चाँडै नै चोटपटक ठिक गर्न सहयोग गर्दछ ।
गर्भवतीका लागि राम्रो : सख्खरमा आइरनको मात्रा अत्यधिक हुन्छ जसले गर्भावस्थाको क्रममा रगतको कमी टाढा राख्न मद्दत गर्दछ ।
तौल कम गर्न मद्दत : तिलको लड्डु सख्खरको मिश्रणले बनाइने भएकाले यी दुईको सेवनले शरिरको मेटाबोलिजम बढाएर तौल कम गर्न सहयोग गर्दछ ।
सुन्दरता बढाउँछ : तिलसँगै सख्खर खाँदा शरिरको टक्सिन बाहिर आउँछ जसले छालालाई नरम र चम्किलो बनाउँछ ।
मुटु रोगको जोखिम कम : यसमा पोटासियम हुन्छ जसले मुटु रोगको समस्याबाट बच्न सहयोग पुर्याउँछ।
कपालको लागि फाइदाजनक : नियमितरुपमा तिलको तेल कपालमा लगाउने हो भने यसले कपाललाई जरैबाट बलियो बनाउनुका साथै कपाललाई चम्किलो बनाउनेगर्दछ। त्यसैगरी, तिलको तेलको प्रयोगले कपाल झर्ने समस्या तथा चायाँ हुने समस्या पनि निर्मुल गर्दछ।
रक्तचाप तथा सुगर रोगीका लागि फाइदाजनक : तिलमा पाइने फाइबर र म्याग्नेसियम तत्वले इन्सुलिन र ग्लूकोज लेवल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ, जसले रगतमा भएको सुगर लेवललाई बिग्रिन नदिई सुगर रोग लाग्ने खतराबाट बचाउने गर्दछ। उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रणमा राख्दछ। अध्ययनकाअनुसार उचित मात्रामा तिललाई आफ्नो दैनिक खानामा समावेश गर्ने हो भने यसले उच्च रक्तचाप हुनबाट जोगाउँदछ।
दाँत र गिजाको लागि फाइदाजनक : तिलको सेवनले गिजालाई बलियो बनाउनुका साथै मुखमा प्लेग जम्ने समस्या निर्मुल गर्दछ। त्यसैगरी तिलको सेवनले मुखबाट आउने दुर्गन्ध, गिजाबाट रगत आउने समस्या र दाँतलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।
तिलको लड्डु कसरी बनाउने ?
तिल - १ कप
गुड - १ कप
घिउ - ३ चम्चा
अलैंची - १ चम्चा
तिल र गुड बराबरी
तिललाई रातो-रातो हुनेगरी राम्रोसँग भुट्नुहोस् ।
कराईमा पानी उमालेर गुँडको बाक्लो घोल बनाउनुहोस् ।
गुँडलाई गाढा रंगको हुनेगरी पकाउनुहोस् ।
अलैंचीको धुलो र भुटेको तिल कराईमा मिसाएर राम्रोसँग चलाउनुहोस् ।
सो मिसावटमा घिउ हाल्नुहोस् ।
अब तयारी मिसावटलाई सानो सानो डल्ला बनाउनुहोस् ।
तिलको लड्डु तयार भयो ।
यसरी तयार भएको लड्डु एक महिनासम्म उपभोग गर्न सकिन्छ ।
संविधानको स्वीकार्यतासँंगै सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल: मुख्यमन्त्री पोखरेल